Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen’Antananarivo : niroso tamin’ny andrana natrehan’ireo manam-pahefana malagasy - Ravinala Airports
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen’Antananarivo : niroso tamin’ny andrana natrehan’ireo manam-pahefana malagasy
Ao anatin’ny fiomanana amin’ny fisokafan’ny seranana iraisam-pirenena vaovaon’Antananarivo ny mpisehatra rehetra miasa eny an-toerana ankehitriny. Noho izany dia nanao hetsika andrana vaovao indray, izay notarihan’ny ekipa ORAT tao amin’ny Ravinala Airports izy ireo ny zoma 31/01/2020. Notronin’ireo manam-pahefana eto an-toerana izany.
Ny ORAT na Operational Readiness Airports Transfer dia ekipa misahana manokana ny fifindran’ny seranana ankehitriny mankany amin’ny seranana iraisam-pirenena vaovaon’Antananarivo. Ilaina ny hetsika andrana ORAT, mba hampiomanana ireo mpisehatra rehetra ao amin’ny seranana iraisam-pirenena ankehitriny, ho vonona tsara rehefa hiasa ao amin’ny seranana vaovao. Ireo hetsika ireo, izay niarahana tamin’ny mpilatsaka an-tsitrapo 450 avy amin’ny oniversite samihafa avy eto Antananarivo, dia miseho amin’ny endrika maro arakaraky ny toerana anaovana azy : toeram-piaingana, toeram-pahatongavana, fiantsonan’ny fiarakodia, fiantsonan’ny fiaramanidina…
Ny tale mpitantana ny ORAT, Andriamatoa Vincent Perrot, rahateo dia nampatsiahy ny maha zava-dehibe an’ity hetsika ity : « Nomena andraikitra hiantsehatra toa ireo tena mpandeha ao anatin’ny seranam-piaramanidina ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo. Atao andrana avokoa araka izany ny karazana mpandeha misy : mpandeha amin’ny sokajy tsotra sy mpandraharaha, ny mpiasan’ny seranana, ireo kaompaniam-pitaterana, ankizy mandeha irery, vehivavy bevohoka, olona tra-pahasembanana, zokiolona, fianakaviana… Ny mpisehatra tsirairay ao amin’ny seranam-piaramanidina dia tokony hampihatra ireo fiofanana sy fomba fiasa vaovao mandritra io hetsika andrana io. »
Isan’ny tanjona tamin’ity hetsika ity ny hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin’ny Ravinala Airports sy ireo mpisehatra rehetra avy amin’ny fanjakana miasa eo amin’ny seranam-piaramanidina. Notarihan’ny kaomandin’ny seranam-piaramanidin’Ivato, Andriamatoa Jean Dieudonné Randrianirinamifidimanantsoa sy ny tale mpitantana ny ORAT, Andriamatoa Vincent Perrot ny fitsidihana izay nahafahana nandray ny torohevitra avy amin’ireo manam-pahefana tonga tao an-toerana, mahakasika ny fomba fiasa ao amin’ny seranana iraisam-pirenena vaovao. Nahafahana ihany koa nampiseho ny fiaraha-miasan’ireo mpisehatra ao amin’ny foibe fanaraha-maso (AOCC) ny fitsidihana natao, mba hanamifasana ny fitandroana ny filaminana ao amin’ny seranana.
Andraikitry ny tsirairay avy ny fanatsarana ny lazan’ny Madagasikara
Mampiseho ireo ezaka ataon’ireo mpisehatra tsirairay avy miasa ao amin’ny seranam-piaramanidina ity hetsika andrana ity, izay natomboka heritaoana lasa izay. Ny tanjona dia ny mba hiomanan’izy ireo amin’ny fisokafan’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovaon’Antananarivo, ary ahafahana manatsara ny kalitao omena ny mpandeha. Ny fahatongavan’ireo manam-pahefana ireo ihany koa dia manamafy ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara ny lazan’ny seranam-piaramanidina, fa indrindra ny lazan’i Madagasikara.
Araky ny filazan’ny Jeneraly Iavizara Rasolonjatovo Franck Julson, mpanolon-tsaina mahakasika ny fiarovana sy ny fandriampahalemana ao amin’ny orinasa Ravinala Airports : “Tsy tontosa izao hetsika izao raha tsy nisy ny fiaraha-miasan’ireo mpisehatra rehetra eto amin’ny seranam-piaramanidina, ary indrindra ireo sampan-draharaha avy amin’ny fanjakana izay mifanerasera mivantana amin’ny mpandeha, izay isaoranay manokana eto.”
Tao anatin’ireo manam-pahefana tonga nanatrika ny hetsika andrana ORAT:
Vice Amiral Antoine de Padou RANAIVOSEHENO Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena
Minisiteran’ny filaminam-bahoaka :
Commissaire Principal de Police Antonia Beby Parola TALBOT, Directeur des Renseignement et du Contrôle de l’Immigration et de l’Emigration, Minisiteran’ny filaminam-bahoaka
Contrôleur Général de Police, Dany Marius RAKOTOZANANY, Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena
Général de Division Christian RAKOTOBE, 2è Adjoint, Kaomandin’ny Zandarimaria
Minisiteran’ny fahasalamana :
Atoa Armand RAFALIMANANTSOA, Tale SVSSER, Minisiteran’ny fahasalamana
Atoa Rado RANDRIAMIARANA, Chef de Service Santé aux Frontières à Madagascar, Minisiteran’ny fahasalamana
Ramatoa Yolande ANDRIANAFERO, solotenan’ny tale jeneralin’ny Fadin-tseranana
Atoa Donné JIVA, Tale jeneralin’ny CSPIM
Izy ireo dia notronin’ny lehiben’ireo mpisehatra eo anivon’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM), Zandarimaria (GTA), Police de l’Air et des Frontières (PAF), serivisin’ny fahasalamana ary ny Fadin-tseranana ao amin’ny seranam-piaramanidina.